Microneedle RF Factory - China Microneedle RF Abavelisi, abaxhasi
I-sano Microneedling yeqonga le-RF yokuphakamisa ubuso ijonge ukuvuselela ulusu iMicroneedle RF
Qinisa kwaye uqinise ulusu lwakho-umatshini wokuphakamisa ubuso weMicroneedle RF
I-Pinxel-2 RF iteknoloji ye-microneedling iteknoloji ayisebenzisi nto (okanye i-filler) engazange ibe nayo, ngokwenene ivuselela i-collagen yomzimba wakho kunye namanqanaba e-elastin ukunyanga iimpawu eziphambili zokuguga. Ulusu lukhangeleka lusemncinci, luqinile. Ubume, imvakalozwi kunye nokucaca, kugudile, kukhanya kwaye kuphuculwe.
Izixhobo ezitsha zeMicroneedle RF Fractional Equipment sano pinxel-2 RF umatshini wokuphakamisa ubuso
Amandla e-RF afudumeza ulusu olusisiseko, lubangele ukuqiniswa kunye nokuqina kolusu, kunye nokukhuthaza imveliso ye-collagen kunye ne-elastin. Ngenxa yokuba amandla e-RF aziswe ngokunzulu, anokuvelisa iziphumo ezikhawulezileyo ezimangalisayo.
IMicroneedle RF UMGAQO-NKQUBO OMFUTSHANE WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA
I-Pinxel-2 Microneedling Scarlet SRF
Ngokunyanga nangempumelelo uphatha zonke iintlobo zolusu
Iindlela ezintathu zonyango ezilungiselelwe ulusu, ubuso, kunye nomzimba
Iingcebiso zeenaliti azinciphisi inani elipheleleyo leempundu
Imoto ye-robotic elandelayo ukuze ufumane isigulana esonwabileyo
Unyango lunokuhanjiswa ukuya kwi-25% ngokukhawuleza
Iindleko ezilahlwayo ezincinci zandisa i-ROI kuqeqesho lwakho
I-Pinxel-2 eyimfihlo ye-RF yinkqubo yenethiwekhi yerediyo yeqhekeza (i-RF) yenkqubo yokuqhekeza izicwili kunye neheestasis eyilelwe ukukhuthaza kunye nokulungisa i-collagen kunye nokujongana neempawu eziqhelekileyo zokuguga. Kufanelekile ukuba isetyenziswe kwizigulana ezinqwenela ukuvuselela kunye nokuhlaziya ukubonakala kolusu lwazo kuzo zonke iintlobo zolusu. Ngokuhlengahlengisa iinaliti ezincinci, i-RF eyimfihlo inokuhambisa amandla kubunzulu obahlukeneyo, ukuze unyango lulungiselelwe ukujongana neenkxalabo zesigulana ngasinye ezinje ngemigca emihle, imibimbi, amabala amabala, ifoto kunye ne-striae kubunzulu obufunekayo.
ukuphakamisa ubuso iqhezu kwenaliti yomatshini wegolide iqhezu le-RF elikwi-microneedle
Inkqubo yenaliti ye-RF yoyilo kuyilo olukhethekileyo lwamanqaku eenaliti ezininzi, isantya esiphezulu solawulo lweemoto zedijithali nge-epidermis kunye nedermis echanekileyo yokulawula ubunzulu be-0.5-3 mm, kwakhona ukuphela kokuphuma kwenaliti yeRF, kuvuselele i-collagen kunye ne-elastic tishu, kwaye ayisiyongo yomonakalo wesikhumba. Xa izicwili zolusu ngale nkqubo, ungqameko lwe-epidermal lukhuselekile, amandla e-RF anokungena kakuhle kwi-dermis, ukukhuthaza iproteplasia ye-collagen, ayisiyiyo kuphela indlela eyiyo yokuphucula iziva, kodwa kunye nokuqinisa imibimbi yesikhumba ixesha elide indlela.
Microneedle Machine Rf MFR SFR Microneedle Fractional Machine Intracel Rf Micro inaliti
Microneedle RF Izahlulo zeRF Ithiyori yonyango MFR Collagen induction therapy
Xa isetyenziswa eluswini, phantsi kwe-anesthesia yendawo okanye engundaba-mlonyeni, inaliti encinci engenazintsholongwane isetyenziselwa ukwenza iindlela ezininzi ezincinanana ezingene esikhumbeni, esenza umzimba wakho uvelise i-collagen entsha yokufikelela kulusu, ngokwenza ulusu zibonakala zihlaziyekile kwaye zincinci. Inaliti egqunyiweyo nengavaliyo Inaliti eguqukayo yokufaka ixesha inika amandla okhuselekileyo kunye nokuchaneka kwamandla ukuphepha ukusebenza kwi-epidermis okanye ezinye izicwili.
Intengiso eshushu ye-2021 yomsinga werediyo eqhekeza umatshini wokuqinisa ulusu
Unyango lwe-SFR Collagen yoNyango
Imijelo emibini eyahlukeneyo ye-SFR ihambisa amandla e-RF ngamandla kwi-Epidermis kunye nedermic superfical ene-synergistic effect, ekhokelela kulusu olukhanyayo kunye nokuqiniswa okulawulwayo.
Amanxeba okuPhulukisa amanxeba ngamandla e-RF Ukusukela iinaliti ezincinci zigqunyiwe ngaphandle kwecala elisecaleni (0.3mm), ii-electrode zenaliti ezihambisa inkunkuma zihambisa amandla e-bipolar ngokuthe ngqo kwi-dermis ngaphandle kokonakala kwi-epidermis. Ukungeniswa kwamandla e-RF amancinci amandla enza i-electrocoagulation eqingqiweyo kwiderm eququzelela inkqubo yoPhiliso lwaManxeba. I-WHM inyusa ukuhlengahlengiswa kwe-collagen kunye nokuncipha kwenxeba, okunyusa ukuyekelela kolusu. Ayisiyonto yokuvuselela ulusu kuphela kodwa iRF inqanda umsebenzi we-sebaceous gland ukuphucula amabala.
I-Pinxel Fractional RF Microneedle Isixhobo esineenaliti ezifakelweyo / i-CE evunyiweyo kumgangatho oqhelekileyo umatshini weRF kumatshini wobuso
I-Pinxel microneedle umgaqo womatshini we-rf:
-PINXEL Umatshini we-RF we-microneedle RF ubonelela ngobushushu ngqo kuzo zombini i-epidermis kunye nedermis ngobunzulu obuchanekileyo bokulawula ngokuzenzekelayo ukusuka kwi-0.5mm ukuya kwi-3mm.
-Isiqwengana seRadio Frequency esisebenza ngokukuko senza ukuba kufezekiswe iipateni zonyango eziqhubekayo kunye neziqhubekayo.
-Isichitha isenzo sakho ngokunikezela ngomngcipheko omncinci wokungasebenzi kunye nentlungu nokuba loluphi na ulusu.
isixhobo esibomvu se-microneedle rf sanhe CE itekhnoloji rf iqhezu le-rf elula ukususa uphawu lokususa umatshini we-microneedle
1. Ukususwa kwamabala amabala, ukususwa kwemibimbi
2. Ukolula uphawu lokususa
3. UkuNcitshiswa kwePore enkulu, ukuvuselelwa kwesikhumba
4. Ukuphakamisa ubuso, ukuqinisa ulusu, ukujonga kwakhona ulusu
5. Ukususwa kwebala.
Umatshini weLaser we-Co2, Ubuhle be-CO2 Laser, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Shr IPL Khetha, Ukususwa kwamabala amabala,